Hadoochaa siyyaasaa akkamanii uummata hadoochanii qaama isaa mara
Hadoochaa siyyaasaa akkamanii uummata hadoochanii qaama isaa mara utuu muranii itti dhagaa’amuu akka didaa jiru hubatuurraa qabsaa’otni qabsoo itti fufan
Qalbeessaa Dhangi’aan, Mudde 22,2018
Qabsoon adda Bilisummaa Oromoo nagaa manca’e deebisee tasgabbii dhalchuudha, warreen jeequmsa horsiisaniif horsiisuu barbaadaan dinninaa uummatarraa qolataa toora tasgabbii qabatuudhaan biyyatti Oromiyaa bilisoomsuu fi daangaa du’aa kaa’uudha malee, akeeka ajjeesuu, ykn akeeka dantaa dhuunfaa guutachuu qabatees abjootees hinbeeku. ABO’n akka waan aangoof qabsootti cichee jiruutti fakkeessanii dhiyeessuun daba. Dhaabni uummata bakka bu’e ijjisaa gara uummataa ilaala malee gara dhaaba isaa akka hintaane osoo beekanii, ABO’n ammoo Oromoo bakka bu’ee Oromoof aarsaa of laatee ofis laataa akka jiru utuu arganii, uummata bakka bu’ee waan jiruuf duuti karaa jallataa Oromoo tokkoo irra ga’u hangam akka itti dhagaa’amu utuu beekanii, kaayyoo aangoof deema jedhanii cubbuu dubbachuun ija uummataa duratti of taajjabsiisuu akka ta’etti ilaala. Qabsoon adda Bilisummaa Oromoo walabbummaa Oromiyaa, fi Bilisummaa Oromoo qabatee, hiree isaa uummatni akka murteeffatu gochuuf san dursees ajjeechaan uummatarraa, buqqaatinsaa fi dararaan hidhaa akka saba isaa irraa dhaabbatu hawwa qabsoonsaas kana. Uummata Oromoo qaamni ajjeesu utuu jiruu, uummata Oromoo qaamni buqqaasu, qaabni mana isaatti dhufee uummata qalu, qaamni manaaf araddaa waliin uummata Oromoo gubu utuu jiru ABO’n taa’ee ilaala jedhanii tilmaamuun, garaa ofii qabu ABO’n qaba jedhee gantuun yaaduuf galtuun yaadu dogoggooreera. Har’as boris nagaa uummatasaaf dursa laachuudhaan qabsoo isaa ABO akka gaggeessu hubachuun barbaachisaadha.
Kan Adda Bilisummaa Oromoo garaa gahuuf eeyyee amma lafa kaayyoof akeeka uummataa dhaqqabeen jira jedhee akkanni ofirraa bu’ee taa’u yoo jiraate, garbummaas taatu bilisummaa uummatni hireesaa ofiin murteeffatee mootummaa filateen gaafa bule, ajjeechaan uummata irraa gaafa dhaabbate, jibbinsi saba Oromoo irraa waan Oromoo taane qofaaf gaafa nurraa dhaabbate, lafarraa buqqaanee dureessa sooraa iyyoomuun daangaa gaafa godhate, kaayyoon wareegamtoota jaallan keenyaa gaafa galma gahe ABO’n amma gaariidha jechuu jira. Kanaan ala afaanfajjii fi calalaqii yeroof calaqqisu, saba utuu miillisaa rukutamuu kolfuu jiru ilaalaa, saba mataansaa dhaanamaa utuu jiruu gammadu ilaalaa, saba handhuuraasaarraa mi’a garaa utuu saamaa jiranii “amma mootummaakoo na bulchaa jira!” Jedhu ilaalaa qabsoo isaa ABO’n hindhaabu. Sababaan Hadoochaa siyyaasaa (Hololaan) uummata hadoochanii qaama isaa mara utuu muranii itti dhagaa’amuu akka didaa jiru hubatuurraa, sabichi bor gaafa hadoochaan kun irraa galu qaama muree kukkutaa jiru kana nyaachuu jira akkasuma xiiqaa’ee akka dhugaa ABO beekuuf hubatus waan ofitti amanuuf har’as taanan ABO’n qabsoo isaa fardeessee itti fufuun ala duubatti akka hinjenne ofitti amantoon karaa nagaa adeemuuf har’as qophii ta’uusaa himaa jira.
Kanaaf diinni abaarullee uummatnisaa jechoota diinasaa funaanee ittiin jechuuf abaaruun irraa hineegamu. Oromoo qaama isaa kan ta’e tokkichasaa ABO akkuma kunuunfateef bakka maratti faarfataa jiru kanatti cimina dhaabasaaf qabsaa’otasaaf gumacha isarraa eegamu bahatee daangaa boohichaaf daangaa gadadootti gochuuf warraaquu qaba! Malee qabsaa’otasaaf dhaabasaa ofirraa dhiibee diina hammachuuf yeroo qabaatuu hinqabu.
Qabsoon Adda Bilisummaa Oromoo nagaa bakkatti deebisuu malee nagaa booreessuu akka hintaane sochiinsaa waggoota dheeraa, addatti hojiileensaaf gaaffiinsaa karaa nagaa rakkoo furra jedhee miira obsa dheeraan gaafataa jiraachuuf turuunsaa nii mirkaneessa. Har’a kan nagaa booressaa jiru ofirraa dabarsuuf ABO tu nagaa booressa jechuu matumaa hindanda’u. ABO’n qaama nagaa booreessus qaama isa nagaa booreessu deggarus miti. Kan nagaa uummataa booresse isa humna uummatattii hidhattoota meeshaa baatan bobbaasee haadha deessuu ajjeesaa Ulfa Ajjeesaa Daa’ima ajjeesaa jirudha. Humna yakka fokkisaa dalagu ofitti aansee Oromoon humna isaa humna ABO ofirraa dhiibuu hinqabu, akkuma duraaf amma ofitti qabee jiru kanatti fuulduraafis humna abdatuuf humna of laateefii hojjetu humna ABO kana kan tikfatuu qabu uummata Oromooti. Uummatni Oromoo qaama waggaa 27 ajjeesaa tureef dhuguma garaa dhiifamaa qabaata jennee hinyaadnu yoo dhiiseefis ilmasaa ABO irra isa waggaa 27 ajjeese jaallata yaada jedhu yaadnees akeeknees hinbeeknu mitis. Waan ta’eef akka uummatni Oromoo WBO gaachana isaa itti kunuunfataa jiru hawwataa ta’uu fi abdachiisaa ta’ullee holola diinaa dhaga’ee waraanasaa akka of harkaa hinfacaafne bo’ii dhumaa kanaan dhaamuun barbaada.
Previous articleMelbourne, Australia: A young Oromo, Agartu, super talented, angel-voiced
Next articleEthnic violence forces thousands from Ethiopia into Kenya
M A Bulii December 24, 2018 At 6:07 pm
dubbii dhugaadha !
Leave a Reply to M A Bulii Cancel reply